नव निर्वाण ।
समिक्षा: शिशिर पराजुली
दु:ख के हो ? यसका कारण के हुन् ? यसबाट मुक्ति कसरी पाइन्छ ? यस्ता प्रश्न सुन्दा जति सरल सुनिन्छन् त्यसको उत्तर उत्तिनै गाह्रो छ । झट्ट सुन्दा यस्ता प्रश्नहरू कुनै सभामा कुनै स्वामीले आफ्ना भक्तहरूलाई स-प्रेम सुनाएजस्तो लाग्छ । माया, प्रेम, यौन र राजनितिको कृतिहरू पढ्दै गरेका नेपाली पाठकलाई माथि उल्लेखित कुराहरू दार्शनिक जस्तै लाग्छन् अनि ति कुराको उत्तर दिन गाह्रै पर्छ । यस्तै प्रश्नको उत्तरको खोजी गर्नलाई मद्दत गर्छ 'निर्वाण' ले ।
अदालतमा 'अक्षर समूह
चितवनलाई साहित्यको उर्वर भूमि नै मानिन्छ । चितवनले थुप्रै आख्यानकार,निबन्धकार, कवि, समीक्षक र कलाकार जन्माएको छ । यही थुप्रै व्यक्तित्व जन्मिएको भूमिमा नेपाली साहित्यमा जमेका केही साहित्यिक मन मिलि साहित्यको श्रीवृद्दिको लागी साहित्यिक समूह 'अक्षर समूह' जन्माएका छन् । चितवनमा रहेर वा राजधानी भन्दा पर रहेर लेख्नेहरूले 'अक्षर समूह' को बारेमा थाहा पाएकै हुनुपर्छ । बजारमा निस्किएका पुस्तक र लेखकलाइ पाठकको अदालतमा उभ्याउने देखी लिएर कविता वाचन, स्रष्टा सम्मान, गजल वाचन जस्ता विषयक कुराहरु अक्षर समूहको प्राथमिकताका विषय हुन् । चितवनलाई शब्द र अक्षरले मात्र नरङ्याएर रङ्गीन चित्रकलाले समेत रङ्गाउने अभियान अक्षर समूहको अर्को प्राथमिकताको विषय हो ।
मौन संवाद: पारिजातको पात्रसँग
बुक्सरिभ्यू नेपाल नेपाली साहित्यको बजारमा पूर्ण रूपमा साहित्यमा समर्पित डिजिटल पत्रिका हो । नेपाली वाङ्यमयमा आधारित रहेर नेपाली साहित्यको विभिन्न विधा-- कथा, कविता, गजल, निबन्ध, समीक्षा, साहित्यिक बहस जस्ता विषयलाई उठान गर्दै साहित्यको आकाशलाई फराकिलो बनाउनु र नव आगन्तुकलाइ प्रोत्साहन र अग्रजलाइ सम्मान हाम्रो उदेश्य हो । हाम्रो उदेश्यलाई पूरा गर्न तपाईंहरूको साथ र सहयोग अत्यावश्यक छ । साहित्य हामी संग र हामी साहित्यका पारखी संग हुनेछौं ।
तपाईको आफ्नो लेख रचना प्रकाशन गर्नको लागि हामीलाई booksreviewsnepal@gmail.com मा मेल गर्न सक्नुहुनेछ !
© 2016 Books Review All right reserved.
वेभ साइट भिजिट :